Ahoana no hividianana ny tarika fanoherana mety ho anao | Trivoshop
Jolay 3, 2019 Ali Review
Ahoana ny fividianana fatra manohitra tsara ny aminao
Ny tarika fanoherana dia mitovy amin'ny lanjany ampolony, saingy maivana sy mifintina ary mora entina izy ireo. Raha te hanana fampihetseham-batana mahomby ianao mandritra ny dia ataonao, ny bandy fanoherana dia safidy mety.
Na dia olona dumbbell aza ianao ary efa nanalavitra ny fampiasana tarika satria mino ianao fa tsy mahasoa izy ireo na angamba tsy azonao antoka akory izay hatao amin'izy ireo izao dia fotoana mety hanandramana zavatra hafa.
Nahoana ianao no tokony hanandrana tarika fanoherana?
Hanatsarana ny fifandanjana sy ny fandrindranao.
Mandritra ny fampiasana tarika dia hahatsapa ny fihenjanana izay hanery anao hampiorina ny vatanao ianao. Ireo fihetsiketsehana ireo dia misy vondrona hozatra betsaka kokoa noho ny fiofanana mavesatra mahazatra izay mampitombo ny haavon'ny fandrindrana sy ny fifandanjana.
Hihaika ny vatanao.
Matetika ny lanjany dia mety manana fetra raha toa ka fanazaran-tena firy no azonao atao, fa amin'ny tarika fanoherana dia afaka mamorona araka izay tianao ianao. Mamela anao hanova ny toerana misy anao amin'ny fomba maro izy ireo amin'ny fampihetseham-batana hozatra izay tsy fantatrao akory hoe misy.
Mba hampitomboana ny hatsaranao.
Ny lafiny mamirapiratra amin'ny tarika dia mety tsy ho an'ireo vao manomboka ihany fa ho an'ireo mpanao fanatanjahan-tena mandroso kokoa. Azonao atao ny mampiasa ny tarika mitovy amin'ny fampihetseham-batana sy ny fampihetseham-batana.
Torohevitra hividianana tarika fanoherana
Manana mihoatra ny iray.
Ny ankamaroan'ny tarika dia manana loko samy hafa mba hanavahana ny haavon'ny fihenjanana. Azonao atao ny misafidy maivana, salantsalany, mavesatra, na mavesatra fanampiny. Ny tsara indrindra dia ny fananana tarika amin'ny habe telo samihafa farafahakeliny satria ny vondrona hozatra isan-karazany dia mitaky ambaratonga fanoherana isan-karazany. Mpampihetsiketsika maro no misafidy Rep bandy fanaovana fanatanjahan-tena satria misy ambaratonga efatra samihafa azon'izy ireo atao.
Tarika mora entina.
Ny tarika sasany dia misy tahony, ary izy ireo dia mety amin'ny fampiofanana amin'ny sandry. Ny fonosana mazàna dia ahitana tarika roa samy hafa farafahakeliny sy tahony azo takalo. Raha mividy fehin-tànana amin'ny fehin-kibo ianao dia ho betsaka ny habaka ao anaty kitaponao, ary ho sarotra kokoa ny hitondra azy ireo.
Atombohy amin'ny iray tsotra indrindra.
Hanombohana, misafidy fantsona lava lava misy tahony. Raha vantany vao hitanao ny fomba ampiasana azy, dia mety te hividy tarika hafa ianao amin'ny karazany hafa.
Tombontsoa iray lehibe amin'ny fampiasana ny tarika dia ny fananana fomba samihafa hametahana azy ireo. Azonao atao ny mamaky azy ireo, mamatotra azy ireo, na mampiasa kojakoja toy ny fametahana varavarana hamoronana fanazaran-tena samihafa. Azonao atao koa ny mividy cuffs misy vodin-tongotra, tanan-tànana samihafa ary kojakoja hafa.
Ho hitanao fa misy karazana fantsom-panoherana misy amin'ny ankamaroan'ny fivarotana fanatanjahantena. Azonao atao ny mividy fantsona fanoherana ifotony ao amin'ny magazay ara-batana, fa raha mitady safidy bebe kokoa amin'ny kojakoja ianao ary, indraindray, kalitao tsara kokoa, dia mety ho hitanao fa tsy maintsy ataonao izany manafatra azy ireo an-tserasera.
Ny fiofanana miaraka amin'ny tarika fanoherana dia tonga lafatra ho an'ny olon-drehetra na inona na inona taona sy haavon'ny asa. Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fampiharana anao dia mividiana habe sy karazana tarika marina. Ny tarika dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ara-batana na famerenana amin'ny laoniny ihany koa, saingy manoro hevitra izahay ny manatona mpitsabo aretin-tsaina na dokotera hahazoana fitarihana manokana.
Filed amin'ny: Fitness, tarika fanoherana, ny yoga
Kisary Chevron ambany Previous lahatsoratra Cutting Edge Technology ho an'ny IT sy ny mihoatra
Next lahatsoratra Ny fanaka an-trano tsara indrindra ho an'ny biraonao Kisary Chevron ambany